युनियन लाइफको आइपीओमा आवेदनको ओइरो, कतिले भरे ? – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > युनियन लाइफको आइपीओमा आवेदनको ओइरो, कतिले भरे ?
युनियन लाइफको आइपीओमा आवेदनको ओइरो, कतिले भरे ?
काठमाडौं, २५ असार । युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपीओमा आवेदनको ओइरो लागेको छ ।
बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटलले दिएको जानकारी अनुसार दोस्रोदिन शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा ११ लाख ७० हजार ९१२ जना आवेदकबाट १ करोड ९६ लाख १ हजार ९३० कित्ता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन्।
हाल १ अर्ब ५० करोड ५० ला
वास्तवमै धितोपत्र बोर्डले धेरै राम्रो काम गरेको रहेछ- सीइओ साउद